Qiso cajiib ah :Waan furay waxay igu tiri garoob ayan ahay cade ee wan ku jeclahay wali ma i jeceshay - iftineducation.com
Qiso cajiib ah :Waan furay waxay igu tiri garoob ayan ahay cade ee wan ku jeclahay wali ma i jeceshay
iftineducation.com – Qiso xanuun badan oo ku dhacday wiil Somaliyeed ayaa inoga Sheyeey wuxuuna inoo diiday in magaciisa lagu qoro webka balse waxan qadan donaa magac kale oo faalso ah sidaas ogow aqistow .
Magacay waa siyaad waxan ku dhashay Magalada Mugadisho waxan ku bar baray Magalada Mugadisho ilaa dugsiga hoose dhexe iyo saraba waxan ku qadatay iskuulada mugadisho.
Maalin maal maha ka mid ah ayaan waxan soo aday Xarunta Gobolka Hiiraan ee magalada baledweyne oo daganeed abehey Hoyadiis oo aan aad ka u jeclaa.
Nasiib wanaag waxan ku bartay gacalisadeydii aan ifka aan ka doortay dumarka oo dhan.
Samiya waa gabar qurxoon madow xigeena ah runtii waxan u qaday jaceyl aan qof adami ah aan u qadin balse maxaa ka danbeyay.
Samiya waan calfan wayay oo dagaalo yar ayaa dhacay xaga familka anigane waxa leygu goodiyay in ley dilayo hadii aan furin Saamiya.
Qof ad dunida u jecahay sida aad uga tagto waa ay dag tahay balse aniga oo wadnaha farta ku haya ayaan furay wana iska soo baxay oo magalada dhan wan iskaga so hajiray.
In muda ah markaan ka maqanaa magalada ugu yaran 4 sano ayaa Samiya xariir ila soo sameysay waxana ishegtay in ay tahay garoob 2 gabdhoodne ay heysato balse aniga damac ba igalay oo jaceylkii aan u qabay ayaa mar qura igu soo labtay.
Samiya dacad mahee dhagar ayeey wadataa.
Allow dinidan hanaga qadin qof wax ku shego lama wayee wax wax ku siiyo ayaa la wayaa ayeey tirahdaa somalida.
Balse gabar aan macrifo aan aheyn ayaa mar qura igu soo garacday telka igu tiri Aboowe setahay xalada kawaran waa gabar ku jecel kaftan iyo sheeko ka dib waxay si kaftan ah igu tiri aboowe wad guursan rabtaa sxbtaadii hore ayaan arkay ee ma is habeyn rabaa ,u danbeysay Nimco fariinta ayan ku wado maxay tahay.
Siyaadow Aboowe Samiya maxa xariir ah oo kala dhaxeya .
Aniga oo ka ilaalinaya ayeey igu iri abaayo Samiya ayada ayaa isoowacda.
Nin yahow hadii aad i amineyso Samiya waa xaaamilo waaba dhali rabtaa ee hadii aad la socoto ka har ama sidaad rabto samey aniga wan ku shegaye .
Siyaad qaracan ayuu mar qura afka doleeshtay oo Samiya dhagar kuma baran.
Siyaad ayaa is weydiyay qiyaanada dumarka iyo hagar damada culus ay la agshay Saamiya.
Aqritow maxad ka ledahay hagar damada Samiya ay ku riday siyaad?
Siyaad xalkiisu cadi maha oo dacad ah buu ahaa balse mar qura ayaa dhulka la wareegay.
Aqritow talo sii siyaad sida uu ugu soo haro Saamiya xalku waa cakiran yahaye.